Igbo, John: Lesson 107 - Gịnị mere Jizọs ji jụọ ajụjụ ọnụ tupu ya ekweta na ọ ga-ajụ ya (Jọn 18:12-27) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 107 (Jesus questioned before Annas and Peter's threefold denial)
2. Gịnị mere Jizọs ji jụọ ajụjụ ọnụ tupu ya ekweta na ọ ga-ajụ ya (Jọn 18:12-27)
12 Ya mere ndi-agha ahu na ndi-isi ndi-Ju jidere Jizos,13 wee duru ya gakwuru Annas, n'ihi na ọ bụ nna nwunye Keifas, onye bụ nnukwu onye nchụàjà n'afọ ahụ.14 Ma Kaiafas bu onye duru ndi-Ju ọdú na ọ bara urù ka otù onye nwua n'ihi ndi-Ju.
Ọ bụghị nanị ndị Juu jidere Jizọs, kama ọchịagha Rom nke biara na ndị agha maka otu nzube ahụ. Kraịst, Onye nwe Onyenwe anyị ọnwụ na ndị mmụọ ọjọọ, ndị mere ka oké ifufe ahụ kwụsị, gwọọ ndị ọrịa, gbaghakwa mmehie ha, jiri obi ịtachi obi kee agbụ ahụ. Onye nweere onwe ya ghọrọ onye a dọtara n'agha. Onye-nwe-ayi ghọrọ onye ejikere ya. Anyị mere nke ahụ n'ihi mmehie anyị jọrọ njọ. Uzo ya na-anọchite anya otu nzọụkwụ ọzọ ruo ala na-eweda ya ala ruo nrịgo kachasị elu n'elu obe.
Annas bụ nnukwu onye nchụàjà site na 6 BC ruo 15 BC. Na tiori, ọ nọ n'ọfịs maka ndụ, mana Rom wepụrụ ya n'oche ya. N'ikpeazụ, ha kpọrọ Caiaphas, Fox, ọgọ ya, onye ọka iwu ụgha.
O mezuru ihe Iwu ahụ chọrọ na ihe ndị Rom chọrọ. Ọ bụ onye aghụghọ na onye aghụghọ, onye amụma nke Setan bụ onye mepụtara amụma ụgha banyere ọnwụ Jizọs iji hụ na ndụ nke ndị mba ọzọ. Ikpe nke mechara bido bụ ọdachi, mee ka ọ mara na a mara onye ahụ ebubo ikpe, na ebubo siri ike, iji gosi ikpe ziri ezi. Ndị na-echegbu onwe ha na akọ na uche ha nyere echiche na ikpe ahụ ziri ezi ma dabere na ihe doro anya.
Jon adịghị edekọ ihe ndị gbara gburugburu nnọkọ abụọ nke Ọnwụnwa ahụ, dịka edere ya na ozioma ndị ọzọ, ma ọ na-enye ọkwá dị elu nyocha na ịjụ ajụjụ tupu tupu Ọnwụnwa ahụ tupu Annas, bụ onyeisi ezinụlọ ndị nchụàjà. Ọ ka bụ onye na-eme ka ihe ndị mepere emepe na ala. Caiaphas nyere iwu ka a gafee ebubo mbụ maka Annas ka ọ bụrụ nkwanye ùgwù.
15 Saịmọn Pita sooro Jizọs, dị ka onye na-eso ụzọ ọzọ. Ma onye nēso uzọ Jisus mara onye-isi-nchu-àjà, o we ba nime Jizos rue ulo onye-isi-nchu-àjà; 16 Ma Pita guzo n'èzí n'èzí. Ya mere onye ọzọ nke nēso uzọ-Ya, onye onye-isi-nchu-àjà mara, we pua gwa onye nēche ọnu-uzọ okwu, we me ka Pita bia. 17 Ya mere nwa-ab͕ọghọ ahu nke nēche ọnu-uzọ si Pita, Gì onwe-gi bu kwa otù onye nime ndi nēso uzọ Nwoke a? Ọ si, Abughi m. 18 Ma ndi-orù na ndi nēje ozi guzoro n'ebe ahu, mb͕e ha surere ọku icheku, n'ihi na ọ bụ oyi. Ha na-ekpo ọkụ. Pita na ha nọ, na-eguzo ma na-ekpesi ọkụ.
Jon na Pita soro Jizọs n'azụ n'abalị. Ebe ọ bụ na Jọn nọ na Nnukwu Onye Nchụàjà, ọ ga-abanye n'ụlọikpe nke ndị ụkọchukwu n'efu. Pita enweghị ike ime otú ahụ n'ihi na ndị ohu na-eche ọnụ ụzọ ahụ.
Jon ama enyene ndutụhọ ke esịt Peter, ada ke ekịm ke enyịnusụn̄. N'ịchọ inyere ya aka, Jọn na nwa agbọghọ ahụ na-eche ọnụ ụzọ maka ya. O kwenyeghị na Pita, "Ị bụghị otu onye na-eso ụzọ nke onye ahụ?" Ọ zaghachiri, "Ọ bụghị m", ọ na-eme dị ka à ga - asị na ọ maghị ihe ọbụla, ọ nweghịkwa òkè n'okwu a, mgbe nke a gasịrị, ọ gbalịrị igbanye ọkụ, ebe ọ bụ oyi.
19 Ya mere onye-isi-nchu-àjà juru Jisus ajuju bayere ndi nēso uzọ-Ya, na okwu-Ya. 20 Jizọs zara ya, sị, "Ekwuru m ụwa n'ihu ọha. Ana m akụzi ihe n'ụlọ nzukọ, na n'ụlọ nsọ, ebe ndị Juu na-ezukọ mgbe niile. Ekwughị m ihe ọ bụla na nzuzo. 21 Gini mere i ji juo m? Jụọ ndị nụrụ m ihe m gwara ha. Lee, ndị a maara ihe m kwuru. "22 Mgbe o kwusịrị nke a, otu n'ime ndị na-eje ozi guzoro Jizọs aka, sị:" Ị zara onyeisi nchụàjà dị ka nke a? "23 Jizọs zara ya, sị:" Ọ bụrụ na Mu onwem ekwuwo ihe ọjọ, biakwasi ajọ ihe; ma ọ buru na ọ di nma, n'ìhi gini ka I nētib͕um? 24 Ma Anas zigara ya Keyafas onye-isi-nchu-àjà.
Nchoputa nke mbu abughi banyere obi amamikpe nke Jisos, ihe ya na azuma ya. Ọ bụ banyere ndị na-eso ụzọ ya na usoro nkuzi ya. N'oge ahụ, e nwere ọtụtụ ọha na nzuzo. Ndị nchọpụta ahụ chọrọ ịchọta ngwa ngwa ma ndị na-eso ụzọ ya hà nwere nsogbu nke na ha nwere ike ịkwụsị nnupụisi ọ bụla.
Jizos go ghi idi nke ndio zodi otú a kama kama ha matara nao naenye ha ihe n 'ozon'oge n'ono nzo zona nime ilo ukwu nke ebeo tommadu natara. Ọ bụrụ na ndị isi ahụ chọrọ ịmara ya n'eziokwu, ha gaara aga ebe ọ na-ezi ihe ma nụ nkọwa nke okwu ya na oku ya. N'ụzọ dị otú a, Jizọs zaghachiri onyeisi nchụàjà ochie ahụ n'ejighị ụjọ. Na mberede, otu n'ime ndị ohu ahụ na-atụ anya ka ya na nnukwu onye nchụàjà nwee ihu ọma, gburu Jizọs. Jizọs egbughị azụ ma ọ bụ gosi iwe. N'otu oge ahụ, ọ dịghị ebelata ụda mpụ ahụ, mana o nyere onye ọrụ ahụ aka ịkọ ihe kpatara ya. Ebe ọ bụ na Jizọs adịghị ọcha, ohu ahụ kwesịrị ịrịọ mgbaghara ma gosi nchegharị.
A na-agwa Annas ihe ịma aka a n'ụzọ na-enweghị isi, n'ihi na ọ bụ maka ọrụ onye ohu ahụ; o kwere ka mmejọ ahụ. Ụdị ụgwọ a na - eme taa megide onye ọ bụla nke na - eti onye ọzọ n'enweghị ihe kpatara ya, ma ọ bụ kwe ka ndị na - eso ụzọ ya mee ka ndị na - emeghị ihe ọjọọ maa jijiji. Onyenwe anyị hụrụ ndị na-enweghị ntakịrị akaụntụ n'anya, sị, "Ebe ọ bụ na ị meela ya na nke kasị nta n'ime ihe ndị a, ị meere m ya".
Mgbe Annas chọpụtara na Jizọs edoghị onwe ya n'okpuru egwu ya, ma kama guzoro onwe ya dịka onyeikpe ma jụọ ya ajụjụ banyere eziokwu na ikpe ziri ezi, o zitere Jizọs ka ọgọ ya bụ Keifas, bụ anụ ọhịa ahụ dị mma, iji wepụ nsogbu ahụ.
25 Saịmọn Pita guzo na-enwusi ike. Ya mere ha siri ya, Gì onwe-gi bu kwa otù onye nime ndi nēso uzọ-Ya, ọ bu gi? Ọ gọrọ, si, Abughi m. 26 Otù onye nime ndi-orù onye-isi-nchu-àjà, Pita we b͕a nti, si, Ọ bughi gi ka m'huworo n'ubi ahu ab͕ara ogige? 27 Ya mere Pita gọrọ agọ ọzọ: ngwa ngwa oke-ọkuku we kwue.
Keifas jụrụ Jizọs ajụjụ banyere ndị na-eso ụzọ ya. Mmadụ abụọ n'ime ha guzo n'ogige ahụ, mana ha ekwupụtaghi na ha bụ ụmụazụ Onyenwe anyị. Peter na ọkụ nke ọkụ na-egosi na ọ bụ onye mba ọzọ, ndị ohu ahụ nwere obi abụọ banyere njikọ ya na Jizọs. Pita we za, si, É-è, Ee e.
Otu n'ime ndị na-enyo enyo na ya mere ebubo dị otú ahụ. Ya mere ndi mmadu nile weere ya anya wee we iwe, karia mgbe otu n'ime ndi oru ahu siri, "Amaara m gi, ahuru m gi n'ubi ahu". Ihe ize ndụ ruru na njedebe, n'ihi na ọkà okwu ahụ bụ onye ikwu nke nwoke ntị Pita kụrụ. Jọn ekwughị ọnụ nkọcha Pita kwupụtara ma ọ bụ nkwenye ọ na-agọnahụ Jizọs, ma ọ na-enyocha àgwà egwu nke Pita, nke na-erughị eru maka onyeozi na-edu ndú.
Oké ọkpa ahụ dị ka ụda ụda ikpe na ntị Pita. Jizos acho ghi onye ozo o bla nke jikere igbaso rue onwu. Ha niile gbapuru, mehie, ghagha ụgha ma ọ bụ gọnahụ ya. Jọn ekwughịkwa banyere anya mmiri Pita ma ọ bụ nchegharị, ma Jọn mere ka ọhụhụ nke ịgọnahụ Onye nwe anyị pụta ìhè. Mpi ahụ na-arụ ọrụ ugboro atọ iji tụọ Pita ụjọ. Chineke nye anyi oke nkpa na mgbe obula anyi na-agha ugha ma obu na-atu egwu ikwuputa Onyenwe anyi. Mmụọ nke eziokwu na-achọ ịdakwasị anyị. Jụọ Jizọs maka ire eziokwu na obi ziri ezi na uche zuru okè.
EKPERE; Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-ekele gị, n'ihi na ị bụ Eziokwu, Patience na Ịlaị. Gbaghara anyị ụdị ụgha nile na ikwubiga okwu ókè. I kuru agbụ nke ihe a kpọrọ mmadụ, kee anyị mmụọ gị, ka ire anyị wee ghara ịgha ụgha ọzọ. Gwa anyị na eziokwu gị, ma kụziere anyị ka anyị gbaa àmà n'aha gị, dị umeala n'obi, nwee amamihe ma kpebisie ike.
Gịnị bụ mmekọrịta dị n'etiti Jizọs na Pita n'oge a gbara ajụjụ ọnụ n'ihu Annas?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:45 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)